Xildhibaan Jeesow ”Dhismaha aan Deganahay qof og uun ayaa i dili kara”! | HalQaran.com
Xildhibaan Jeesow ”Dhismaha aan Deganahay qof og uun ayaa i dili kara”!
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah Xildhibaanadda baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shaki weyn ka muujiyay qaraxii Arbacii ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose ee Maamulka Gobolka Banaadir.
Mudane Jeesow oo la hadlayay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in qaraxii ka dhacay Xarunta Dowladda hoose laga shaqeeyay qorshihiisa, islamarkaana ay jiraan shaqsiyaad og xubnaha dowladdda qolalka ay dagan yihiin.
Dhanka kale Xildhibaan Jeesow ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay kala xisaabtami doonaan qaraxaasi, waa haddii aysan jawaab ku aadan ka keenin.
“Maanta meesha uu qaraxa ka dhacay ayaa naxdin kale igu sii ah, sababtoo ah dhismaha aan deganahay qolka aan ka seexdo inaan ku jiro, qof og ayaa i dili kara, haddii uu i soo baaro, arrintaas dhacday Dowladda Federaalka aad ha u baarto, marna mala qaadan karo qaraxaa ka dhacay iyo qof is qarxiyaa galay, sabab noocaasi ah lama qaadan karo, dadkii ka dambeeyay arrintaas waa in gacanta lagu soo dhigaa.”ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
“Xitaa haddii meesha lagu sii diyaariyay qaraxa intee la soo marsiiyay? Maya maya sax maaha, waa in hay’adaha amniga jawaab deg deg ah ay ka keenaan, haddii ay ka keeni waayaan waan la xisaabtamaynaa, ha ogaadaan.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Jeesow.
i dili kara